Awona matyala aphezulu e-COVID ahlala ekhula kwaye e-Hawaii ngelixa uKhenketho lukhula
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Awona matyala aphezulu e-COVID ahlala ekhula kwaye e-Hawaii ngelixa uKhenketho lukhula
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • Iindaba zeMpilo • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Irhuluneli yaseHawaii uDavid Ige kunye neLieutenant-Governor uJosh Green
Ukhenketho lwaseHawaii luyanda. Xa uhamba uxakekile eKalakaua Avenue eWaikiki okanye uyokuthenga e-Ala Moana Centre okanye kwi-snorkeling eWaikiki Beach, ngekhe wazi ukuba iHawaii inengxaki yezempilo engxamisekileyo.
Abaninzi bayibiza ngokuba iyothusa. IHawaii ibhalise amatyala e-COVID-622 amatsha angama-19 namhlanje kunye nokufa kwabantu abathathu.
Kwiiveki nje ezi-3 ezidlulileyo, inani losulelo olutsha lwemihla ngemihla lisukile kuma-40 laya kuma-60 laya kuma-100 kwaye ngoku laya kwangaphezu kwama-600. Elona nani liphezulu lakha larekhodwa kuRhulumente waseHawaii lalingama-307 nge-11 ka-Agasti ka-2020.
Ukuya kuthi ga kwi-30,000 iindwendwe zasekhaya zase-US zifika kwi Aloha Chaza yonke imihla, ushiya iinqwelomoya ezininzi zibhabha ngomthamo kuthungelwano olwandayo lweendlela zomoya ezintsha zasekhaya.
The Igunya lezokhenketho laseHawaii kunye ne-Hawaii Governor Ige abalikhankanyi icandelo lezokhenketho xa beqinisekisa ukonyuka okuphezulu kwamatyala e-COVID.
Irhuluneli, nangona kunjalo, uxelele eTurboNews:
Izithintelo zokuhamba zezabo bonke abakhweli, hayi abatyeleli kuphela, kwaye akaqwalaseli naluphi na utshintsho kwinkqubo yoKhuseleko ngoku ngeli xesha.
Intsholongwane kunye nokhenketho ziyanda eHawaii.
Namhlanje, ngaphandle kwamathandabuzo, kokonyuka okuphezulu kwamanani osulelo okhe, kwaye oku kuyothusa.
Iihotele kunye neenqwelomoya zisezikhundleni; akukho ndawo iitawuli esantini kwiilwandle ezininzi.
Ngama-100 + amanani anyukayo mihla le, urhulumente wangena ekutshixeni okupheleleyo kunyaka ophelileyo, kodwa ngoku ngamatyala amatsha angama-600, iRhuluneli yaseHawaii kulindeleke ukuba iphakamise yonke imiqobo eseleyo xa inqanaba lokugonya lifikelela kuma-70% yabemi.
Irhuluneli u-Ige uthe kwinkomfa yeendaba namhlanje, i-70% + inani kulindeleke ukuba lifikelelwe ngo-Septemba.
IHawaii itshintshe iikhrayitheriya zayo ngendlela yokuphendula kwi-COVID-19 kunye nokwahluka kwayo ngokuthatha isigqibo kuthintelo olusekwe kumanani amanani, ngoku ukuba kusekwe kwinani labantu abagonyelweyo kurhulumente. Ewe, iindwendwe ezingama-30,000 zifika kwi Aloha Urhulumente akanampembelelo kulo mlinganiselo okanye amanani.
Ngokuka Rhuluneli, abantu abayi-6 kwabali-10,000 300 abagonyiweyo bayosuleleka, xa kuthelekiswa nama-10,000 kwabayi-XNUMX abangagonywanga.
Irhuluneli yacebisa ukuba wonke umntu agonywe, agcine umgama ozi-6 leenyawo kwabanye, kwaye anxibe iimaski ngaphakathi.
Irhuluneli ayinakuphawula eTurboNews imibuzo malunga nethuba lokubeka ezinye izithintelo endaweni yazo, ezibandakanya imida yokutyela, ukufika kweendwendwe, kunye nexesha lokubuyela ekhaya.
Uqoqosho ngokucacileyo luyaphumelela kwiinkxalabo zempilo ze-COVID, kwaye iHawaii ngoku ikhokela ilizwe kulo myalezo, ngelixa imida yamazwe ihlala ivaliwe.
I-Italiya yandisa uLuhlu lweeNkqubo ezifuna uGonyo ...
Umongameli wangaphambili wase-Afghanistan uhlala e-UAE nge- $ 169 ...
Iinqwelomoya zaseHawaii zivela ngamandla kwi-COVID-19 ...
I-21 yeemarike ezingama-25 eziphezulu zehotele e-depress okanye ...
Ukhenketho lwaseUganda lwamkela ukuphinda kutyunjelwe uKhenketho
Umzalwana omtsha ophilileyo e-Emirates ubizwa ngokuba ...
I-Tokyo ibhengeza imeko ye-COVID-19 yonxunguphalo kodwa iTokyo ...
I-EU: Imithetho emitsha yokungena eHong Kong isongela ...
Uluhlu lweeBhakethi kuthotho: Izinto ezintathu zokugqibela ...
Uqinisekisa njani ukuba ukukhutshwa kwakho kumaphephandaba kufundwa ngabantu ...
I-COVID-19 ubhubhane ukhukulisa amandla eepassport zepremiyamu
I-Embassy yase-UAE kwaSirayeli yiparadesi entsha yoXolo
Amakhulu aphumile kwimpi yaseSardinia ...
I-Russian Sputnik V COVID-19 isitofu esivunyiweyo ...
Ngaba le yindlela yokuphelisa ubhubhane emhlabeni?
I-Air France ikholelwa eSanta Claus engaphantsi kwama- $ 400
Umphathiswa Wezokhenketho waseJamaica Udibana neNew Canada ePhakamileyo ...
Agasti 1, 2021 kwi-14: 15
Ooooh… yoyikisa! Kufuneka sihlale sisoyika! Amatyala AKALALISWA esibhedlele, kwaye ukusweleka oku-3 kubemi abangaphezulu kwesigidi se-1.4 ayisiyontlekele. Ngaba abo bantu bathathu babhubhile 'ngo-covid okanye bafa' nge 'covid. Ukutyeba kakhulu kunye nokusetyenziswa gwenxa kweziyobisi kuxhaphakile kwezi ziqithi… zeziphi iimeko ebezikho ngaphambili aba bantu babenazo? YEKA uloyiko loloyiko !!